Tatitra farany momba ny fifidianana solombavambahoaka no natao farany omaly dia filazana ny vokatra voaray amin`ny ankapobeny tahaka ny fanaovana fampitahana ireo fitanana an-tsoratra (PV) dia tao amin’ny distrikan’i Soalala, Arivonimamo ary Ambositra. Marihina fa ny PV avy amin`ny distrika Analalava no misy vokatra tsy feno satria tsy mazava loatra ny tatitra. An’arivony ireo fangatahana hanao fampitahana saingy 837 amin’ireo no nekena ary nanatontosana fampitahana fitanana an-tsoratra avy amin’ny distrika 23. Miisa71 kosa ireo fitoriana voarain’ny CENI hatramin’ny omaly mifandraika amin’ny tsy fanarahan-dalàna mandritra ny fampielezan-kevitra sy ny andro fandatsaham-bato. Mbola mandray hatramin’ny sabotsy 15 jona, fotoana hamoahan’ny CENI ny voka-pifidianana feno vonjimaika. Ho an’ireo fitoriana sy fitarainana mikasika ny tsy fanekena ny vokatra kosa dia mandritra ireo 48 ora aorian’ny famoahan’ny CENI ny voka-pifidianana feno vonjimaika no ahafahana mametraka izany eny anivon’ny HCC. Fito amin’ireo fikambanana 39 nomen’ny CENI fankatoavana hanara-maso ny fifidianana solombavambahoaka kosa no nahatonga tatitra eny anivon’ny CENI. Na dia tapitra ny 6 jona aza ny 10 andro omen’ny lalàna hanaterana ny tatitra dia mbola mandray ny CENI. Hifanaraka amin`ny vokatra navoakan`ny filoham-pirenena tany Frantsa ve no havoakan`ny CENI ? Raha tsia, inona no mety hitranga ? Andrasana hatrany ny tohiny.